UMaxim Hodak ligqwetha laseDatshi | Law & More B.V.
UMaxim Hodak ligqwetha lase-Dutch elinamava asemthethweni aphesheya (ngaphakathi endlini) kugxilwe ngakumbi kwinkonzo kubathengi abavela kwiimarike zase-Eurasian eNetherlands kumacandelo omthetho wobumbano waseDatshi, umthetho wezorhwebo waseDatshi, umthetho wezorhwebo wamanye amazwe, ushishino ezemali kunye nokudibana kunye nokufunyanwa, ukusekwa kunye nokulawulwa kweeprojekthi ezintsonkothileyo zamanye amazwe kunye nolwakhiwo lwerhafu / lwezezimali. UMaxim Hodak unxibelelana ngesiDatshi, isiJamani, isiFrentshi, isiNgesi, isiRashiya kunye nesiUkraine.UMaxim Hodak ugxile kubathengi abavela e-Eurasia njengempendulo yemfuno ekhulayo yabaxhasi yokufumana ingcebiso kwezomthetho kunye nenkxaso kwisakhelo sokumisela ukusebenza kunye UMaxim Hodak waqala umsebenzi wakhe wezomthetho eClifford Chance Brussels ngo-2002. Emva koko usebenze njengomcebisi wezomthetho kwi-ING Bank eNetherlands. Ngo-2005 wacelwa ukuba ajoyine ijelo le-TV lamazwe aphesheya njengomcebisi jikelele kunye nomphathi olawulayo wenkampani ebambeleyo ukuxhasa iziko ekukhuleni nokwanda kwamazwe aphuma eNetherlands. Ukuqala ngo-2009 uMaxim Hodak uqhubeke ngokuzeleyo ukubonelela ngeenkonzo zomthetho kubaxumi abahlukeneyo base-Eurasia eNetherlands ngokujolisa kumthetho wequmrhu nowezobhambathiso, irhafu yamanye amazwe, ulwakhiwo lweeasethi kunye neprojekhthi yezemali. isidanga semfundo yobungcali emva kwesidanga kwindawo yoTyalo-mali lwezeMali (iSikolo soLawulo lwe-EHSAL, eBrussels). UMaxim Hodak ngaphezulu uxakeke yimfundo eqhubekayo yaseDatshi yezomthetho kunye neyerhafu.
UMax Hodak Ngaba ligqwetha lase-Datshi kumthetho-siseko onamava omhlaba jikelele (endlini) ojolise ekunikezeleni abathengi kwiimarike zase-Euro eNetherlands kwimimandla yomthetho wamashishini amaDatshi, umthetho wezentengiso waseDatshi, umthetho wezorhwebo wamanye amazwe, ezemali kunye Ukudibana kunye nokufunyanwa, ukuseka nolawulo lweeprojekthi zamazwe antsonkothileyo kunye neerhafu / izakhiwo zezemali. UMaxim Hodak unxibelelana ngesiDatshi, isiJamani, isiFrentshi, isiNgesi, isiRashiya nesiUkraine.
UMaxim Hodak ugxile kubathengi abasuka e-Eurasia njengempendulo kwisidingo esikhulayo sabaxumi ukufumana ingcebiso kwezomthetho kunye nenkxaso kwisakhelo sokuseta imisebenzi nokulungisa ii-asethi kunye nemisebenzi kulawulo lweDatshi.
UMaxim Hodak waqala umsebenzi wakhe wezomthetho eClifford Chance Brussels ngo-2002. Emva koko wasebenza njengengcebiso kwezomthetho kwi-Ibhanki yase-ENTherlands. Ngo-2005 wacelwa ukuba ajoyine ijelo le-TV yehlabathi jikelele njengesiluleko ngokubanzi kunye nomphathi olawulayo kwinkampani ephetheyo ukuxhasa eli ziko ekukhuleni kwamanye amazwe kunye nokwanda okuvela kwi-Netherlands. Ukuqala ukusukela ngonyaka ka-2009 uMaxim Hodak uqhubeke ngokupheleleyo ukubonelela ngeenkonzo zomthetho kubaxumi abahlukeneyo base-Yurophu eNetherlands kugxilwe kumthetho wokudibana kunye nowesivumelwano, irhafu yezizwe ngezizwe, ukwakhiwa kweeasethi kunye nemali yeprojekthi.
UMaxim Hodak ubambe isidanga se-Master kwi-Law (iYunivesithi yaseAmsterdam) kunye nesidanga semfundo yobungcali kwi-Post-Investment (EHSAL Management School, eBrussels). UMaxim Hodak uqhubeka nokuxakeka yimfundo eqhubekayo yamaDatshi yezomthetho kunye nerhafu.